Hlola i-Pisa, Italy - World Tourism Portal
Hlola iPisa, Italy
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili ePisa, e-Italy.
Okufanele ukwenze ePisa, e-Italy
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yePisa
Bukela ividiyo ekhuluma ngoPisa
Hlola iPisa idolobha laseTuscany, Italy nesibalo sabantu abathile be-90,000. I-Pisa yaziwa kakhulu ngomhlaba odumile we-Leaning Tower, kepha labo abeza lapha ngomqondo wabo sebevele benzile ukuthi uMbhoshongo ukuphela kwento ongayibona bangaphuthelwa ezinye zezimangaliso zobuciko bokwakhiwa kwaleli dolobha elihle.
Uhhafu wehora uhamba usuka eCampo dei Miracoli (Inkambu Yezimangaliso) uye esiteshini sesitimela ugibela umgwaqo ohamba ngezinyawo uhamba nokuningi okubonakalayo, izitolo nezindawo zokudlela. Indlela enhle yokuvakashela iPisa ukuhamba emigwaqweni; maphakathi nedolobha lincane kakhulu, ngakho-ke jabulela ukubona nomoya.
UPisa wayengeke abe yiPisa ngaphandle kweNyuvesi. Leli dolobha livuselelwa ngabafundi, abahlela amaphathi, imibukiso, nemicimbi yamasiko, bese begcwalisa umgwaqo ophakathi nedolobha ebusuku. I-University of Pisa inabafundi be-60,000 edolobheni elinezakhamuzi cishe ze-90,000. Uzobona ukugcwala kwabafundi edolobheni uma usuhambile kwabavakashi Campo dei miracoli.
Isikhumulo sezindiza sasePisa Galileo Galilei yisikhumulo sezindiza esikhulu saseTuscany futhi sisebenzela izindiza eziningana ezisebenza ngamakhulu izindiza zamasonto onke eziya ezweni likazwelonke nakwamanye amazwe. Izinkampani eziningi zinikezela ngezindiza ezihamba ngezimoto eziya nokubuya ezindaweni ezimbalwa zaseYurophu naseYurophu. Isikhumulo sezindiza sisondele enkabeni yedolobha - kuthatha imizuzu embalwa ukufika esikhungweni.
Ama-ejensi amaningi wokuqasha izimoto asezindiza. Ngenkathi ungeke udinge imoto edolobheni uqobo, kungaba yisinqumo esihle uma ufuna ukuhamba ngeTuscany usuka ePisa.
I-Pisa ihlukaniswe izingxenye ze-4 zomlando. Kukhona okungaphezu kwe-Leaning tower edolobheni futhi kutholakala uhambo lwawo olwahlukahlukene lokuhamba.
I-Piazza dei Miracoli noma Insimu Yezimangaliso isenyakatho enkabeni yePisa. Yisiza Samagugu Omhlaba we-UNESCO futhi iqukethe izinto ezaziwa kakhulu zedolobha
I-Torre Pendente (Leaning tower). Lesi sakhiwo ekuqaleni sasithathwa njengombhoshongo wensimbi yesonto likati. Ukwakha kwaqala e-1173 futhi umbhoshongo waqala ukuncika ngokushesha ngemuva kwalokho ngenxa yokuncika komhlaba ngaphansi kwesisekelo sawo. Iphrojekthi yokuvikela umbhoshongo ukuthi ungasondeli kakhulu futhi iphokophele ekugcineni ifinyelele esiphethweni esiyimpumelelo e-2001, futhi umbhoshongo uvulekile futhi kulabo abafuna ukukukhuphukela. Ukukhwela umbhoshongo kudinga ithikithi elibekelwe ukubhuka. Amathikithi angathengwa embhoshongweni ngosuku, isikhathi esithile sokungena. Lokhu kungaba imizuzu ye-45 kuya emahoreni we-3 ngemuva kwesikhathi sokuthenga, kepha kuningi ongakubona ngenkathi ulindile. Kungcono uma uthenga amathikithi ku-inthanethi kusenesikhathi. Yenza umzamo wokukhuphuka, noma kunjalo, futhi uzothola umvuzo ngokubuka lokho. Ilukuluku: umbhoshongo odumile wePisa akusiwona kuphela, ngenxa yezwe lomxhwele abakhelwe kulo; kuneminye imibhoshongo ye2 ePisa: iBell tower yeSan Nicola Church, eduze namaphethelo e-Arno kanye neBell Tower yeSan Michele yeSonto leSczi.
UDuomo di Pisa (Isonto lamaPisa). Isonto elihle kakhulu liqukethe ubuciko bukaGiambologna, uDella Robbia, nabanye abaculi abakhulu. Isitayela esihle se-Romanesque esinezindlela eziphindwe kabili kanye ne-cupola, isithombe esikhulu esihle se-Cimabue, nesipulpiti esihle esenziwe nguGiovanni Pisano ngemuva kwesitayela seGothic / ekuqaleni kweRenaissance. Amathikithi esikhathi samahhala atholakala kusihleli samahhovisi amathikithi
I-Battistero (Baptism). I-dome enkulu eyindilinga ye-Romanesque enemihlobiso eminingi ebaziwe kanye nokubuka okuhle phezulu; khuphuka lokhu uma ufuna ukubukwa okuhle nge-Leaning tower ebonakalayo ezithombeni zakho. Isitayela sendawo yama-Arabhu, ipulpiti nguNicola Pisano (ubaba kaGiovanni), nefonti enhle ye-octagonal. Ngezikhathi ezithile, umgada-ongena emnyango ungena endaweni yokubhabhadisa futhi anikeze ukuphathwa komsindo kwe-echo-effect. Unogada umemeza imisindo embalwa okuthe uma kuzwakala umsindo onjengomculo omnandi omsulwa. Ungaphuthelwa. Ungaphonsa nokuvinjwa kwakho emoyeni, ume odongeni, futhi ucule amanothi amade aphenduka abe amachilo wedwa, njengoba izingxoxo zihamba zizungeza udonga lwesakhiwo.
ICampo Santo Monumentale (Amatshe Esikhumbuzo). Isakhiwo esikhulu samathuna esinobuciko obuningi obuthokozisayo, kufaka phakathi iqoqo le-sarcophagi yasendulo yamaRoma kanye nezinto ezinhle zakudala ezazibhalwe ngu “Master of the Ukunqoba Kokufa”.
UMuseo del Opera del Duomo unemifanekiso ebunjiwe nemidwebo eyayikade ilondolozwa eKhathedrali nasemathuneni. Okunye okungandile kakhulu ngama-briffin ethusi avela eSyria athunjwa amaCradaders. Ungathatha futhi izithombe ezinhle ezivela kuMbhoshongo nakuDuomo kusuka kuvulandi wayo.
UMuseo delle Sinopie Weqiwe yizivakashi eziningi, lo mnyuziyamu uyindlela yabathandi bezobuciko. Ngemuva kwe-WWII iningi lezinto ezisaphilayo ezisaphaziliwe nezasendlini ezibucayi zePisa's Campo Santo zakhishwa ezindongeni ukuzama ukuzigcina. Kwatholakala kungalindelekanga ukuthi imidwebo yomculi engaphansi kwayo isindile. Lokhu kuhanjiswe kule mnyuziyamu.
IPizaza dei Cavalieri indawo encane yedolobha enezakhiwo eziningi zomlando ezabamba amandla ezepolitiki aleli dolobha ngeminyaka ephakathi neRenaissance, kodwa iningi lazo alitholakali kubavakashi, njengoba manje sebephethe i-University of Pisa noma iScolaolaaleale Superiore (isikole esidumile sempi).
I-Palazzo della Carovana. Isakhiwo esikhulu se-Scuola Normale Superiore, esinobuhle obukhulukazi, ngumculi obalulekile wase-Italy Renaissance nomakhi wezakhiwo uGiorgio Vasari - ophinde abe ngumlando wokuqala wezobuciko.
I-Palazzo dell'Orologio (Clock Palace). Isakhiwo sekhulu le-XIV esithathe isikhundla seTorre della Fame (umbhoshongo wendlala), lapho waboshwa khona uConte Ugolia della Gherardesca futhi washiywa ukuthi afe yindlala namadodanakhe, njengoba kukhonjiwe kwiDante's Divedia Commedia.
I-Chiesa di Santo Stefano (iSt Stephan Church). Isonto elakhiwe nguGiorgio Vasari ngekhulu le-XVI le-Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano (Order of Chivalry of Saint Stephan), umyalo wokushayisana owasungulwa ukulwa nobuphingi e1561.
Ezinye izakhiwo zomlando zihlanganisa iSonto laseSan Rocco, iRectory, iPalazzo Carovana nePalazzo dei Dodici.
UMuseo di San Matteo, Piazza San Matteo, 1, lungarno Mediceo. Lo ngumlando omnandi nomnyuziyamu wezobuciko, ohlala cishe kuwo wonke umsebenzi wobuciko ovela kuwo wonke amasonto nasePisa. Yize incane impela, ingenye yobuciko obukhulu kakhulu beTuscan Renaissance, eyabanjelwa emakamelweni esigodlo sezindela iSan Matteo. Igugu elinganakwa kakhulu yizivakashi eziningi.
ILungarno Mediceo neLungarno Pacinotti ohlangothini olusenyakatho nomfula i-Arno, iLungarno Galilei neLungarno Gambacorti ohlangothini oluseningizimu: le migwaqo yomfula inika umlingiswa ohlukile kuPisa, ikakhulukazi ebusuku lapho isibani sikhanya khona emfuleni i-Arno.
IPizaza Garibaldi nePiazza XX Settembre, isikwele sedolobha esiphikisanayo, eyodwa ekugcineni kwendawo iPonte di Mezzo (ibhuloho eliphakathi nendawo), futhi zithathwa njengesizinda sedolobha. Ukusuka kuPiazza Garibaldi kuqala iBorgo Stretto, umgwaqo wakudala onezitolo eziningi okuthi, ngokubambisana neCorso Italia eqala ngaphesheya kusuka ePiazza XX Settembre, kwakha indawo yabahamba ngezinyawo (ephazanyiswa yibhuloho kuphela) elibhekwa njengendawo ephakathi nedolobha. EPiazza XX Settembre ungathola iLogge dei Banchi, isakhiwo esenzelwe ukubamba imakethe yezindwangu e1600, kanye nehholo ledolobha, ePalazzo del Comune.
ISanto Sepolcro, eLungarno Galilei, isonto lamaRoma eli-octagonal eline-spical edonswa nguDiotisalvi, naye owakha ubhaptizo - isonto leTemplar, elishayayo futhi elinamandla. Imvamisa ayivulelwa umphakathi.
I-Ussero Café eyasungulwa ku-1775, lungarno Pacinotti 27. Isikhumbuzo sesiko lamaNtaliyane ePalazzo Agostini ye-1400, eLungarno. E-1839, kwakuyisihlalo semihlangano yeCongress of the Scientists yokuqala yase-Italy.
Santa Maria della Spina. Isonto elincane kakhulu lamaGothic eLungarno Gambacorti elakhelwe e1230 ukubeka iva elalivela emqheleni kaJesu; kubhekwa njengenye yezinkulumo ezinhle kakhulu ze-gothic yase-Italy. Incane kakhulu isuka emfuleni we-Arno, e-1800, iye endaweni ethile ngamamitha ngenhla, itshe elilodwa ngesikhathi, ukuze ivikeleke ezikhukhuleni. Imvamisa ayivulekele umphakathi.
IGiardino Scotto, eLungarno Fibonacci ekugcineni kweLungarno Galilei, iyinqaba eguqulwe ipaki yomphakathi esivula ehlobo ukuze ikhonsathi yomoya evulekile, imibukiso yomculo neminye imicimbi.
I-La Cittadella (I-Citadel). Inqaba ekugcineni kweLungarno Simonelli, eyakhelwe ukuvikela ukungena emfuleni i-Arno kanye nenxanxathela yomkhumbi phakathi kweminyaka ephakathi, lapho ulwandle lwalusondele edolobheni.
Ingadi ye-botanical University, edlula ngoLuca Ghini 5, ingadi yokuqala yaseyunivesithi yase-botanical eYurophu, eyenziwe ngentando yeCosimo de Medici e1544. Kuvulekile phakathi nezinsuku.
Amasonto amahle ama-Romanesque - uSan Paolo a Ripa d'Arno, San Michele eBorgo, eSan Paolo negalari ebunjiwe ngaphakathi, iSant'Andrea - akubona bonke abavulekile nsuku zonke; hlola kabili amahora uma ufuna ukuvakasha.
UTittomondo, uKeith Haring mural. UKeith Haring uvakashele uPisa futhi wathandana nedolobha, ngakho-ke wanquma ukupenda lo mbhalo omangalisayo njengesipho kuPisa. Noma kukhulu kakhulu, kulula ukungaphuthelwa ngakho-ke zinakekele; itholakala phakathi kwe-Giuseppe Mazzini nange-Massimo D'Azeglio nje ngePiazza Vittorio Emanuele II.
NgoJuni i-16th uPisa uphethe umcimbi weLuminara, owenzelwe usuku losanta ongumvikeli (San Ranieri). Ekushoneni kwelanga, wonke amalambu aseceleni kwe-Arno ancishisiwe futhi kukhanyiswe amakhandlela angaphezu kwe-10,000, okwenza ukubonwa okuhle ngoPonte di Mezzo. Imisebenzi ehlukahlukene ihlelwe emigwaqweni kanti nobusuku buphela ngomlilo omkhulu.
Okunye okuhehayo ehlobo yiGioco del Ponte (Game of Bridge), ukubonakaliswa komlando okwabanjwa minyaka yonke ngeSonto lokugcina likaJuni, lapho izinhlangothi zombili zedolobha (iTramontana neMezzogiorno, ezihlukaniswe indawo ngumfula wase-Arno) zibamba iqhaza emlandweni indwendwe, nge-709-walk-ons, bese-ke iphonsela inselelo komunye nomunye umdlalo lapho amaqembu abo, ngalinye elakhiwe ngamalungu e-20, azame ukunqoba i- “Ponte di Mezzo” (ibhuloho eliyinhloko ePisa) ngokucindezela i-trolley ukuze phoqa iqembu lezimbangi ukuba lisuse ebhulohweni.
Okokuhlwa ebusuku, akunamakilabhu amaningi noma izindawo zomculo bukhoma ePisa: ubusuku obujwayelekile ePisa buba nesidlo sakusihlwa se-pizza noma i-kebab eshibhile, ubhiya eBorgo Stretto, noma iPiazza delle Vettovaglie noma i-pub ezindaweni eziseduze. , nokuhambahamba ePiazza Garibaldi naseLungarni, lapho “i-spallette” (izindonga eziphansi zezitini eziseduze nomfula) kugcwele izitshudeni.
ICasciana Terme: amanzi atshisayo asetshenziswa eCasciana Terme kusukela ezikhathini zasendulo, eminyakeni yakamuva ibona ukusetshenziswa kwawo kunwetshwa ekwelashweni kwezokwelapha kwamuva, ekwelashweni kwenhliziyo nokuphefumula, ekuphuculeni imisebenzi yokugaya ukudla nokwelashwa kwabo, ngoba isenzo sayo semvelo, sokuphumuza sivumela iziguli ukuze ziphinde zisebenze ngokulingana kokusebenza kwazo kanye nokuthokozela kwezinenjabulo ezazilahlekele.
ISan Giuliano Terme: Amanzi anomthelela omuhle futhi namanzi acwebile we-magnesic sulfate, anemvelo ngokwemvelo ebalulekile, akhuphuka phansi kweNtaba iSan Giuliano eSpain ukuphuma ezitsheni ezahlukahlukene futhi aqoqeka ngamaqembu amabili abizwa ngokuthi “Amabhati aseMpumalanga” ( I-40 ° C izinga lokushisa) kanye ne- "West Baths" (38 ° C lokushisa).
Indawo ephakathi nendawo yezitolo igxile ezungeze iCorso Italia, phakathi kwesiteshi sesitimela nePonte di Mezzo (ibhuloho eliphakathi nendawo) naseVia Borgo Stretto, enyakatho nebhuloho. Kodwa-ke, izitolo eziningi ezikhethekile ziyafafazwa ezungeze idolobha.
Indawo ezungeze umbhoshongo osondayo ihloselwe izivakashi: Kunezindawo eziningi zezikhumbuzo ezincane, iziteyithisi kanye “nabathengisi ezindizayo”, abathengisa zonke izinhlobo zesikhumbuzo kusuka ezifanekisweni ezincane kuya ezingilazini zamahora - empeleni isisusa esivamile.
Njalo emavikini amabili kukhona i-bazaar enezincwadi ezishibhile impela, amarekhodi nezinto ezindala zasendlini.
Njengomthetho ojwayelekile, zama ukungadli eduze kwe-Leaning tower lapho amanani ephakeme futhi ephansi. Yiya endaweni ephakathi nendawo (imizuzu engu-5-10 uhamba ngezinyawo usuka ePiazza dei Miracoli): ungathola izindawo ezinhle kakhulu zokudlela ezishibhile. Isibonelo, kunezindawo zokudlela ezinhle kakhulu ezidayiswayo, ezinomusa nezithengiswa kahle emakethe yemifino emincane ematasa, iPiazza delle Vettovaglie. Futhi i-Via San Martino, eduze kwebhange eliseningizimu lomfula, inikezela ezinye izindawo ngekhwalithi enhle nentengo ephansi.
Zama amanye ama-biscotti adumile (amabhisikidi noma amakhukhi). Amakhekhe kulo lonke idolobha azothengisa izinhlobo eziningi, ngentengo ephansi.
Ngokukhethwa kwesabelomali, uma uqhamuka esikhumulweni sezindiza, kukhona esitolo sakwaCoop ngakwesobunxele, eVia Pasquale Pardi.
Ebusuku basehlobo, wonke umuntu uhlala ngasogwini lwemifula, aphuze iziphuzo ezithengiwe emishinini eminingi yendawo. Amabha wewaini ambalwa amahle kakhulu ayatholakala kubanda, ubusuku basebusika.
Amagquma wePisa asevele eyindawo ethandwayo yabahambi abakhanyiselwe engxenyeni yokuqala yama-1700s, ngenxa yokuthandwa kakhulu kwe-spa eshisayo yeSan Giuliano, ngokushesha okwaba indawo yemfashini yezigaba eziphakeme. Izindlu ezisemgwaqweni ezihambisana namagquma, esivele saziwa njengezindawo zokulala nokuzilibazisa enhliziyweni yasemaphandleni, ngokushesha zabe sezici zezindawo zokungcebeleka eziyiqiniso.
Ungahamba ngesitimela uye kuleli elinye idolobha elihle laseTuscan.
Kufinyeleleka kalula ngesitimela kusuka ePisa Centrale.
Cinque Terre ngesitimela esiya eLa Spezia futhi Genoa
UCalci utholakala kalula ngebhasi. Idolobhana eliphakathi nendawo ebukekayo lihlala ezintabeni zasePisan. I-Charterhouse kaCalci neMnyuziyamu yoMlando Wezemvelo (okuyikhaya elikhulu kakhulu eqoqweni lamathambo omkhomo eYurophu) kuphakathi kokuhehayo.